Sida loo iibsado Foxconn Stock ee Mareykanka 2022 | Tallaabo - Tusaha Tallaabada
Bogga ugu weyn Sida loo iibsado Foxconn Stock ee Mareykanka 2022 | Tallaabo - Tusaha Tallaabada
Isha sawirka: www.foxconn.com
Ku saabsan Foxconn
Ku saabsan Foxconn Stock
Maxaan fiiriyaa ka hor intaanan iibsan Foxconn Stock?
Waa maxay Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Foxconn Stock?
Sideen uga iibsan karaa Foxconn Stock gudaha Mareykanka?
Iibsashada kayd faa'iido leh waxay noqon kartaa mid aad u adag in la dillaaco gaar ahaan shirkad caalami ah sida Foxconn halkaas oo maalgashadeyaal badani u ordaan si ay u sheegtaan saami.
Intaa ka sokow, shirkadu waxay caan ku tahay macaamilkeeda ugu sarreeya ee elektiroonigga macaamiisha, qaybaha, iyo alaabada elektiroonigga ah ee kumbuyuutarka waxayna leedahay faa iido saafiya.
Sida laga soo xigtay xisaabinta Bloomberg News, dakhliga saafiga ah ee shirkadda ee saddexda bilood ee dhammaaday Sebtember wuxuu ahaa NT $ 30.9 bilyan ($ 1.1 bilyan), marka loo eego qiyaasaha falanqeeyaha celcelis ahaan NT $ 28.7 bilyan.
Warbixintan, maalgashadayaal badan oo adduunka oo dhan ah ayaa soo jiitay saamiyada shirkadda ee heer qaran iyo mid caalamiba. Maal -gashade ahaan, iyada oo aan lahayn hagid habboon, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad qaniinto saami haddii xitaa aad haysato lacag aad ku maalgashato.
Xaggaas, waxaan u sameeyay maqaalkan inaan kaa caawiyo. Maqaalkani wuxuu ku siin doonaa tillaabo tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan sida looga iibsado Foxconn Stock ee Mareykanka 2022 si fudud. Waxay kaloo kaa caawin doontaa inaad wax ka barato faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka Foxconn Stock iyo waxyaabo kaloo badan.
Jadwalka tusmada kore wuxuu ku siinayaa dulmar dhammaan qodobbada lagu xusay maqaalkan.
Foxconn waa shirkad soosaarka elektiroonigga ah oo caalami ah oo ka shaqaysa elektiroonigga macaamiisha, qaybaha, iyo alaabada elektiroonigga ah ee kombiyuutarka.
Moreso, waxay siiyaan qaybaha mashiinnada baabuurta korantada iyo baabuurta, modules -ka kuleylka, xirmooyinka kombiyuutarka, alaabada isku -darka, taleefanka gacanta, iyo xirmooyinka 3C.
Intaa waxaa sii dheer, shirkadda waxaa sidoo kale loo yaqaanaa Hon Hai Industry Co. waxay leedahay sumcad caalami ah. Taasi waa sababta maal -gashadeyaal badan oo heer qaran iyo kuwo caalami ahba ay ugu ordaan inay sheegtaan saamiga shirkadda.
Xusuusnow, shirkadaha waaweyn sida Apple, Sony iyo Dell waxay ka mid yihiin shirkadaha tirada badan ee Foxconn u dhisto badeecadaha.
Ma u baahan tahay kayd dinaar? Eeg kuwan 25 Kayd ee ugu Wanaagsan ee Maanta la Iibsan Karo | Tusaha Maalgashiga
Foxconn waa shirkad fadhigeedu yahay Taiwan oo warshado ku leh guud ahaan Shiinaha iyo Mareykanka. Shirkaddu waxay leedahay dhinac dhaqaale oo xoog leh oo joogto ah. Taasi waa sababta maalgashadayaasha qaranka iyo kuwa shisheeyeba ay u yimaadaan saami.
Si aad u noqoto mid faahfaahsan, saamiyada Foxconn waxay ku dhowdahay $ 2.0 saamiga (64.10 NT $) hadda. Xusuusnow, maalgaliye ahaan, waa inaad fiirisaa waxqabadka saamiyada shirkadda muddo dheer.
Tusaale ahaan, 52 -kii toddobaad ee la soo dhaafay qiimaha ugu hooseeya ee saamiyada shirkaddu ku baayacday waxay ahayd 57.50. Si kastaba ha noqotee, 52-usbuuc sare, wuxuu ahaa 80.00.
Hal shay oo ku saabsan qayb kasta waa in ay ku lug leedahay heer halis ah. Marka laga reebo halista, waxyaabaha qaarkood waa lagama maarmaan inaad tixgeliso haddii aadan rabin inaad ka qoomamayso aakhirka.
Wixii Foxconn Stock, waa ku habboon tahay inaad ka eegto hab dhammaystiran ka hor intaadan gadan. Taas micnaheedu waa, waa inaad tixgelisaa qodobbada tirada iyo tayada leh sida wadarta dakhliga, iibsiga dhowaan, maaraynta ama tartanka. Waxaas oo dhami waxay saamayn ku yeelan karaan waxqabadka guud ee shirkadda.
Sidoo kale, tixgeli awoodda aad u leedahay inaad ka hesho Foxconn macluumaad muhiim ah oo sax ah. Macluumaadka sida heerka halista iyo xogta maaliyadeed.
Baadhid 10ka ugu wanaagsan ee Penny ee Robinhood 2022 | Eeg Qiimayaasha
Sida saamiyad kastaa u leedahay faa'iidooyin iyo qasaarooyin u adeega kor iyo hoosba, sidaas oo kale waa Foxconn Stock. Jadwalka hoose wuxuu muujinayaa faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka iibsashada Foxconn Stock oo sidoo kale loo yaqaan saamiga Hon Hai.
Foxconn waxay sumcad caalami ah ku leedahay dunida warshadaha. Waxay saamayn ku yeelan kartaa hoos u dhaca dhaqaalaha adduunka iyo suuqyada saamiyada
Hantidu waxay leedahay darawalo koritaan badan leh. Waxaa la saadaalinayaa in la sameeyo $ 10 bilyan oo maalgelin ah oo Maraykan ah 15ka sano ee soo socda Foxconn waxaa laga yaabaa inuu si xun u saameeyo dagaalka ganacsiga Mareykanka/Shiinaha ee hadda jira tan iyo markii ay ku soo saaraan aaladaha dhirta dhul weynaha Shiinaha.
Hantida Hon Hai ee ka hooseysa $ 5 saami kasta: Halista hoos u dhac ku yimaada dalabka alaabta Apple
Sideen ku iibsan karaa Foxconn Stock ee Mareykanka?
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo aad uga iibsan karto Foxconn Stock gudaha Mareykanka. Halkan, waxaad ku baran doontaa afar dariiqo oo aad ku iibsan karto Foxconn Stock (Hon Hai Stock).
Marka hore u hel ADRs (aalad dhaqaale) ee Foxconn Stock. Kani waa habka ugu fudud ee loo maalgalin karo Foxconn haddii aad tahay maalgaliye Mareykan ah. Qalabkan, waxaad si fudud uga iibin kartaa kaydkaaga mar kasta oo aad rabto.
Xusuusnow, Waxaad ka iibsan kartaa ADRs saamilayste kasta oo sumcad ku leh Mareykanka oo marin u leh isweydaarsiga elektiroonigga ah ee OTCMKT. Sidoo kale, waxaad dooran kartaa inaad ka hesho Foxconn ama Hon Hai ADRs dillaaliyeyaasha ganacsiga saamiyada ee bilaashka ah sida Webull ama Roobinimada.
Dhinaca kale, waxaad iibsan kartaa rasiidhada kaydka caalamiga ah (GDRs) halkii ADRs. Rasiidka kaydka caalamiga ah sidoo kale waa aalad maaliyadeed.
Farqiga ayaa ah in rasiidka dhigaalka ee Global uu yahay aalad gorgortan oo uu soo saaray bangi dhigaal oo matalaya saamiyada shirkad ajnabi ah oo si guud loo ganacsado.
waxaad heli kartaa Xisaabiye Dillaal oo caalami ah. Doorashadani si fiican bay u socotaa haddii aad rabto inaad si toos ah u maal gashato saamiyada Foxconn. Koontadan, waxaad ku heli lahayd adeegyada dilaalinta caalamiga ah.
Adigoo adeegsanaya adeegyadan, waxaad u roonaan kartaa suuqyo badan oo shisheeye oo xitaa waxaad heli kartaa taageero.
Ka sokow gelitaanka suuqa, waxaad sidoo kale awoodi kartaa inaad la -talin ka hesho shirkadda dillaalka oo ku saabsan sida loo maro qorshahaaga maalgashiga.
Fiiri liistada dillaaliinta onlaynka ah ee ugu fiican ee aad koonto ku furan karto. Laakiin maskaxda ku hay in aad awooddo iibso Kayd aan Dillaal lahayn.
Maalgashiga firfircoon ee SoFi
E * GANACSIGA
Haddii kale, waxaad iibsan kartaa miisaaniyada wadaagga ah ee ka diiwaangashan Mareykanka ama lacagaha is-weydaarsiga (ETFs). Lacagahan, waxaad si wadajir ah u yeelan kartaa dammaanad -qaadyo.
Sidoo kale, waxaad ku ganacsan kartaa saamiyada, curaarta, ama sarrifka badeecadaha lacagaha. Qaar ka mid ah ETF -yada ka ganacsada Mareykanka waxaa ka mid ah:
Qiimaha ugu sarreeya ee Dividend Yield Hedged Equity ETF (HDEE)
Vanguard Total Market Market ET
iShares Core US Wadarta Bond ETF
Shirkadda iShares Core S&P Total US Stock Market ETF waxay ku saleysantahay Maraykanka
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF waa shirkad ka ganacsata sarrifka saamiyada adduunka
SPDR MSCI Taiwan Quality Mix ETF (QTWN) waa calaamad sax ama calaamad ah saamiyada SPDR MSCI Taiwan Quality Mix ETF.
iShares Russell 1000 Kobaca ETF
Sanduuqa First Trust Taiwan AlphaDEX Fund (FTW)
Waxaad koonto ku furi kartaa saamilayda fadhigiisu yahay Taiwan. Ikhtiyaarkan, haddii aadan aqoon u lahayn Luqadda Mandarin ee caadiga ah ee laga isticmaalo Taiwan, waxaa laga yaabaa inaadan jeclayn doorashadan.
Laakiin haddii aad taqaan luqadda, waxaad ku furan kartaa koonto leh Isweydaarsiga saamiyada ee Taiwan (TWSE). Markaad isdiiwaangaliso, waxaad heli doontaa aqoonsi maalgashade reer Taiwan ah iyo aqoonsi canshuureed oo aad u adeegsan doontid inaad koonto uga furato Taiwan Depository Clearing Corp.
Xusuusnow, waa inaad soo martaa hab toddobaad ah oo la yiraahdo "Ogow Macmiilkaaga" (KYC). Markaad dhammaystirto hawsha tan xigta waxay noqon doontaa inaad ka iibsato kaydka Hon Hai TWSE oo aad maal gashato Foxconn.
Akhri Sidoo kale: 15 Trackers Portfolio Portfolio Stock Online oo Bilaash ah 2022
Mid kasta oo ka mid ah afarta siyaabood ee kor looga hadlay, waxaad ku iibsan kartaa Foxconn Stock laakiin haddii aad rabto inaad qaaddo waddo sahlan, ka dibna u tag xulashada iibsiga ADRs. Tani waa sababta oo ah ADRs ama GDRs, waxaad si fudud u iibin kartaa kaydkaaga.
Saamiyada ugu fiican ee ka hooseeya 10 doollar Si joogto ah 2022
Sida Loo Iibsado Tooska Apple Tooska 2022 | Tilmaan -Tusaha Tallaabada
Waa maxay Maalgelinta Kobaca? Dulmar
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay Maalgelinta Kobaca? Sidee badanaa loo habeeyaa? Hagaha Maalgelinta Kobaca Ganacsiga Fursadaha kobaca…
Waa maxay shatiyada aan u baahanahay si aan u bilaabo ganacsi?
Tusmada Tusmada Qari Maxay Muhiim u tahay in la helo Shatiga Ganacsiga? Waa maxay Ganacsiga California…
Tusmada Tusmada waxay qarisaa Qiimaha Shatiga Ganacsiga LouisianaSida Loo Helo Shatiga Ganacsiga Louisiana Iyo…
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay ganacsiga wax-soo-saarka?
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay sababta aan ugu baahanahay Software Management Money?